Saif Ali Khan Oo Xaqiijiyey Inuu Filimsameeyahaani Soo Caan Bixin Doono Gabadhiisa Sara Ali Khan - Hablaha Media Network
Saif Ali Khan Oo Xaqiijiyey Inuu Filimsameeyahaani Soo Caan Bixin Doono Gabadhiisa Sara Ali Khan
HMN:- Muddo dheer ayaa waxaa la hadal haayey warar xan ah oo sheegaya in Sara Ali Khan uu soo caan bixin doono Director Karan Malhotra iyadoo filimkaas uu hogaamiye ka noqon doono Hrithik Roshan.
Si kastaba ha ahaatee, aabeheed Saif Ali Khan oo ah jillaa si weyn looga garanaayo Bollywood, ayaa wuxuu daaha ka qaaday in Sara Ali Khan uu soo caan bixin doono filimsameeyaha caanka ah Karan Johar.
Saif ayaa warbaahinta u sheegay in gabadhiisa Sara Ali Khan oo 23 sanno jir ah ay dhawaan kusoo biiri doonto shirkadda Bollywood: “Waxaan u maleynayaa inay kusoo biiri doonto Bollywood. Aad ayaan ugu faraxsanahay inay la shaqeyneyso filimsameeye Karan Johar.
“Sababtoo ah waa filimsameeye cajiib ah oo ku fiican soo caan bixinta dhallinyarada, wuxuuna kusoo caan bixin doonaa filim ku habboon. Sidoo kale Karan Johar waa nin akhyaar ah waana filimsameeye dulqaad badan wuxuuna wax badan ka fahamsan yahay aflaanta.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay Sara maadaama ay la shaqeyneyso filimsameeye khabiir ah sida Karan Johar”.
Saif waxaa dhawaan u dhashay cunugiisii seddaxaad waana Taimur Ali Khan oo ay u dhashay Kareena Kapoor. Wararka xanta ah waxay sheegayaan in filimka ay Sara kusoo caan bixi doonto uu noqon doono Student of The year 2 oo uu hogaamiye ka yahay Tiger Shroff, sidaas darteed doorkaas waxay ka qaadan doontaa Disha Patani oo uu jaceyl kala dhexeeyo Tiger.